Shina LED bozaka fahazavana mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > bozaka Light > LED bozaka fahazavana
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny jiro bozaka dia mampiasa LED ho loharanom-pahazavana. Ny LED dia manana fiainana maharitra ary afaka mahatratra mihoatra ny 100,000 ora. Ambany ny volavolan-jotra amin'ny fampiasana ary tena mety ny ampiasaina amin'ny jiro amin'ny masoandro. Indrindra indrindra, ny fahaiza-mitarika dia nahatratra ny fianjeran'izy ireo lehibe, ary nihatsara ny toetrany tao anatin'ny dimy taona lasa. Nandritra izany fotoana izany, ny vidin'ny vidiny / fampisehoana dia nihatsara ihany koa. Tarihin'ny famatsiana herinaratra DC ambany varatra, ambany ny vidin'ny fanaraha-maso ny hazavana, maivana ny hazavana sy ny maizina, ny fanodinana matetika ary tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny fanatanterahana ny fitarihana. Ny loko mifehy, ny fanovana ny fiparitahan'ny mazava ary ny famoahana nofy mitovitovy dia mifanaraka tsara daholo, noho izany dia mety indrindra amin'ny jiro ahitra amin'ny masoandro. Izy io dia manana toetra mivaingana be dia be izay mety hiteraka valiny tsy mendrika raha tsy avela. Na izany aza, ny fahombiazan'ny varotra ankehitriny manidina any an-tsena dia mety hahatratra 15lm / w ihany, ary afaka manatona jiro telo-jiro loko telo-jiro telo loko voalohany.
Raha jerena ny fijerin'ny vidiny, ny vidiny ankehitriny isaky ny lm: Ny volon-tanànan'i Sanzi, loko miorina amin'ny hazavana avo lenta amin'ny herinaratra jiro (anisan'izany ankehitriny) 0.022 yuan, 2002 ny fividianana jiro fotsy f5mm dia 1.9 ~ 3.0 yuan, ny famokarana ankehitriny isaky ny vidin'ny lm avo, hafa ny fahasamihafana. Avy amin'ny fomba fijerin'ny fiainana fampiharana, ny fiainan'ny jiro miloko telo-loko miloko telo (miaraka amin'ny ballast elektronika) dia mahatratra 6000 ora, ary afaka hahatratra 100 ora ny fitarihana. Avy amin'ny fisehoan-javatra, ny fiainana LED dia jiro telo loko voalohany amin'ny jiro sy ny jiro (ao anatin'izany ny elektronika am-polony isan-taona no voafatotra), fa tsy tena rahona izany.
Ny ankamaroan'ny jiro solar dia ahitam-bokatra amin'ny hazavana fotsy mamirapiratra. Latsaky ny 10 000 ora ny fotoana nahatratrarana ny fantsom-pahazavana fotsy mangatsiaka fotsy izay nitarika ny fikojakojana ny fampidiran-dra kely marika 50% amin'ny herin'ny voalohan'ny taona 20ma. Ny fanovoan'ny herin'ny herinaratra ao amin'ny Fudan University no nanaporofo izany. . Izany hoe, ny LED dia tsy loharano maivana tsara indrindra amin'ny herinaratra amin'ny tontolo marobe, raha tsy jiro sy jiro afovoany ambanin'ny tany izy io izay manana fiainana andavanandro afa-tsy 1 ka hatramin'ny 2 taona, izay eo ho eo ny 1w na latsaka ny jiro sy ny masoandro . Ho an'ny jiro solar dia ambonin'ilay 1w, tsara kokoa ny mampiasa jiro telo-jiro miloko telo-jiro miorim-paka. Amin`izao fotoana izao, misy jiro solar sasany miaraka aminny hazavana fotsy maoderina 30 ~ 40 super, ary 2w ny hery fampidirana. Amin'ity tontolo iainana ity, raha ampiasaina ny jiro miloko telo-jiro miloko telo loko, ny vidiny dia 1/10 ihany no an'ny LED, ary ny flx mazava ho azy no tany am-boalohany. In-4.
Raha ny fanadihadihana etsy ambony dia heverina fa misy jiro ambany herinaratra azo avy any ambanin'ny alàlan'ny 1w izay mifehy ny hazavana sy ny haizin'ny fihodinana. Toy ny mahazatra, LED dia tokony ampiasaina ho loharano maivana. Na izany aza, rehefa mampihatra ny jiro fotsy fotsy mamirapiratra dia ilaina ny mandinika tsara ny olana momba ny fikojakojana ny lumen, raha tsy izany dia hitarika korontana mora foana. Ho an'ny jiro solar ary ny herinaratra avo lenta, dia mitombina ny fampiharana ankehitriny ny loko telo-loko miloko telo-fahombiazana. Marihina eto fa ny tsoakevitra etsy ambony dia famakafakana izany ihany. Raha miakatra ny haavon'ny fahaiza-mitarika dia mihena ny vidiny ary ny fehin-kevitra etsy ambony dia tsy maintsy ovaina.
Mba hiatrehana ny jiro bozaka mazoto, mandinika ny fahatokisana, ny tahan'ny vidin'ny fampisehoana, ny mari-pana loko, ary ny fahombiazana manjelanjelatra, heverintsika fa ny jiro tsara indrindra dia tokony ho jiro telo-jiro miloko loko voalohany amin'ny loko.
Buy LED bozaka fahazavana nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba LED bozaka fahazavana ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized LED bozaka fahazavana Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.